Chine mividianana fananana any Japana orinasa sy trano orinasa | Serivisy fampirantiana fampiratiana tany Shanghai
Ny fividianana fananana any Japana dia endrika "fampiasam-bola", saingy azo antoka fa tsy amin'ny lafiny ara-bola amin'ny teny fotsiny. Ny fananana fananana dia hisy fiantraikany amin'ny fiainanao amin'ny fomba ara-tsosialy, ara-tsaina ary ara-kolontsaina.
Ny fividianana fananana any Japana dia endrika "fampiasam-bola", saingy azo antoka fa tsy amin'ny lafiny ara-bola amin'ny teny fotsiny. Ny fananana fananana dia hisy fiantraikany amin'ny fiainanao amin'ny fomba ara-tsosialy, ara-tsaina ary ara-kolontsaina. Mitaky endrika fanoloran-tena sy andraikitra manolo-tena izy io fa midika izany fa tsy afaka mampitaha ny fananana fiombonam-bola amina orinasa Japoney iray.
Ny fomba fividianana fananana
Tsy misy faneriterena ara-dalàna amin'ny vahiny manana fananana trano any Japon.
Ny fifampidinihana sy ny fanadihadiana manokana dia mety manomboka manomboka rehefa voafidy ny fananana. Zava-dehibe ny manakarama ny serivisy amin'ny serivisy trano, izay afaka miasa toy ny mpandika ny mpividy ihany koa. Tsy fanomezana ara-dalàna anefa ny tolotra na taratasy fangatahana.
Talohan'ny fifanarahana, ny Juyoujikou- Setsumeisho (mitovitovy amin'ny Fanambaram-pananana momba ny fananana na fanambaram-pananana momba ny fananana mpivarotra) dia novolavolain'ilay masoivoho trano. Novorina ny fifanekena fividianana rehefa raikitra ny fifanarahana. Aorian'io, ny tahiry 10% dia andrasana amin'ny mpividy alohan'ny daty ny fifanarahana.
Mandritra ny famaranana dia avadika ny lohateny. Ny andaniny roa dia tokony hanana taratasy fanamarinana momba ny fahatsapana tombo-kase. Hisy ny hajia, ary ny saram-panjakana sy ny hetra alaina dia aloa hisoratra anarana.
Ny dingana farany dia ny fandoavana ny fifandanjana sisa.
Ny dingana rehetra amin'ny fanoratana ny fananana dia manana fomba enina izay azo tanterahina ao anatin'ny 12 andro.
Latabatra fanamarihana ambany pejy amin'ny latabatra vidin'ny vidin'ny fifanakalozana
Ny vidin'ny fifanakalozana mandritra ny fitsangatsanganana dia misy ny vidin'ny fividianana ary avy eo ny fivarotana indray ny fananana - ny sarin'ireo mpisolovava, ny saram-pianakaviana, ny saram-pisoratana anarana, ny hetra, ny sarin'ireo mpandraharaha sns.
Ny fivarotana trano dia ampidirina haba amin'ny 5%. Ny fivarotana ny tany dia averina amin'ny hetra amin'ny fanjifana.
Ny 5% -n'ny hetra amin'ny fanjifana 5% dia ahitana ny hetra amin'ny vidim-piainana 4% ary hetra amin'ny fanjonoana eo an-toerana.
Ny hetra amin'ny alàlan'ny fividianana dia nidina tamin'ny salan'isa 4% ho an'ny tany. Ny hetra dia apetraka amin'ny fanombanana ny trano arak'izay nomen'ny sampandraharahan'ny governemanta eo an-toerana, izay matetika manodidina ny 60% ka hatramin'ny 80% amin'ny sandan'ny vidin'ny fananana.
Ny hetra amin'ny fividianana dia nidina tamin'ny salan'isa 4% ho an'ny tranobe tsy an'olon-tsotra.
Hetra momba ny fisoratana anarana
Ny hetra momba ny fisoratana anarana dia ampidirina amin'ny salan'isa 2% ho an'ny tany ary 2% ho an'ny trano. Ny hetra dia apetraka amin'ny fanombanana ny trano arak'izay nomen'ny sampandraharahan'ny governemanta eo an-toerana, izay matetika manodidina ny 60% ka hatramin'ny 80% amin'ny sandan'ny vidin'ny fananana.
Vola Agom-panomezana trano
Ny saram-pivarotana hetra ho an'ny trano dia napetraka amin'ny 3.15% amin'ny vidin'ny varotra amin'ny fananana, miampy JPY63,000 (US $ 578).
Previous: Programme an'ny zom-pirenen'i Turkey
Manaraka: Philippines Market Market Market amin'ny 2020
Fampirantiana fifindra-monina any Japana
Fampisehoana fananana manankarena ao Japana
Fampirantiana fananan'i Japana
Fampirantiana tena trano Japoney